Deeq lacageed oo bulshada Xudur ka timid oo lagu wareejiyay guddiga Gurmad Qaran-Sawirro | Somali National Television - sntv.so
Home WARARKA MAANTA Deeq lacageed oo bulshada Xudur ka timid oo lagu wareejiyay guddiga Gurmad...
Deeq lacageed oo bulshada Xudur ka timid oo lagu wareejiyay guddiga Gurmad Qaran-Sawirro
Xudur(SONNA)-Dhalinyarada iyo ganacsatada magaalada Xudur ee xarunta gobolka Bakool, ayaa markii ay dhacday musiibadii 14 October ee dadka badan ku geeriyoodeen waxaa ay u istaageen sidii qeyb ugu qaadan lahaayeen dadkii ku waxyeeloobay musiibadaas.
Olole dhaqaale, aruurin ah oo ay hormuud u ahaayeen dhalinyarada magaaladaas ayaa laga bilaabay xaafadaha iyo qeybaha kale ee magaalada Xudur, ayagoo sidoo kale adeegsaday Idaacad FM ah oo magaalada Xudur ka shaqeysa.
Dhalinyarada ayaa aruuriyay lacag badan, waxaana maanta lagu wareejiyay guddiga gurmad qaran lacag dhan $ 3771 taas oo uu wakiil ka ahaa Cali C/raxmaan Aadan oo ka tirsan warbaahinta dowladda.
Xasan Maxbuub Mursal, oo kamid ah dhalinyarada Soomaaliyeed ee ka soo jeeda gobolka Bakool isla markaana kamid ahaa wakiilada lacagta wareejiyay ayaa sheegay in dadka ku nool magaalada Xudur iyo guud ahaan gobolka ay dhibaato weyn kala kulmeen Al-shabaab taa oo ay jirtana isku dayeen in ay caawiyaan walalahooda dhibaateysan.
Guddoomiyaha guddiga maaliyadda ee guddiga gurmad qaran, C/laahi Maxamed Shirwac ayaa lacagtaas ka gudoomay wakiilada, waxaana uu sheeegay in ay gaarsiin doonaan dadkii loogu talagalay ee dhibaniyaasha ah.
Previous articleMaxaad ka taqaanaa Degmada Warshiiq warbixin
Next articleMadaxweyne Gaas oo faah faahiyay duqeyntii hoggaamiyaha Daacish ee Soomaaliya